Dawladda oo laga dalbadey in ay musuqmaasuqa ka hor tagto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shorshe qaran oo laga hortageyo wax´isdabamarinta ayaa dawladda laga dalbadey in ay diyaariso. sawir: Ruud, Vidar
Dawladda oo laga dalbadey in ay musuqmaasuqa ka hor tagto
wadoshaqeeyn cusub ayaa laga hortageyaa denbiyadda.
La daabacay fredag 3 november 2017 kl 10.06
Qorshe qaran oo laga hortago musuqmaasuqa ayaa dawladda laga dalbadey in ay sameeyso. Dalbashadan waxa soo gudbiyey ururka ka hortaga muqmaasuqa ee caalamiga ah ee la yidhaahdo Transparency International.
Ulla Andrén oo ah gudoomiyaha ururkan ayaa sheegtay in loo baahan yahay in uu jiro qorshe fududeynaya in laga hortago wax´isdabamarinta.
-Waxan u baahan nahay in aan si joobta ah uga hortagno muqmaasuqa. Sweden marka loo eego wadammada kale waxan joognaa meel wanaagsan, laakiin muqmaasuqu uma yaraanayo sida aan doonayno, ayey tidhi Ulla Andrén.
Dhibaatada muqmaasuqa ee ka dhacda haayaddaha hantidda dad weeynaha maareeya ayaa ah waxa ururkan doonaayo in la joojiyo. Iyaga oo dalbanaya in la sameeyo qorshe u sahlaya hogaamiyaasha shirkadaha iyo haayaddaha dawliga ah in ay ka hortagaan wax´isbadamarinta. Sidoo kale waxa Transparency International soo jeediyeen in dhamaan haayaddaha cadaaladda ay dhibaatadan ahmiyad dheeraad ah siiyaan.
Waddanka Mareeykanka waxa maxkamadduhu cidda muqmaasuq lagu helo ay ku xukumaan ciqaab aad uga adag tan Sweden qofka lagu xukumo. Tusaale ahaan ganaax bilyan gaadhaya ayaa qofka lagu xukumi karaa Mareeykanka halka Sweden ganaaxa ugu badan yahay 10 milyan.